U turidda dadka iyo Waaninta Wanaagsan-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
U turidda dadka iyo Waaninta Wanaagsan-DHAGEYSO
Published on January 29, 2013 by Admin 2 · No Comments · 2,520 views
Diinta Islaamku waxay ku faaftay oo daafaha adduunka ku gaartay dhaqan-wanaagga iyo dhimrinta dadkii na soo gaarsiiyay oo uu ugu horreeyo Ras’uulkeenna Muxamed NNKH, kaas oo tusaale u ahaa dulqaadka iyo sama ka talinta.
Waxaa jira dadyow marka ay dadka wax farayaan adeegsada hadallo kul kulul, kuna kaca ficillo aan loo riyaaqi Karin , sida iyago oo wax ka sheega qofka ay waaninayaan ama ku xanaaqa sabab la’aan.
Kooxaha qaarkood sida Alshabaab waxay u itaal sheegtaan dadka waxayna toos ugu xad gudbaan waxyaabaha u gaarka ah, sida iyagoo heeso ama sawirro ka baara mobilelada gacanta ee dadka, ama tinta ka xiira dhallinyarada.
Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah waxaa caado noqotay in aad aragto canug 15 jir ka yar oo karbaashaya hooyo 90 jir ah,dharka ay xirantahay dartii , ama meel fagaare ah shaaribka uga xiiraya Oday awoowe ugu aaddan.
TUBTA TOOSAN 28.01.2013
Waxaa dhacday in dad Filim ama ciyaro daawanaya Bambo lagu tuuro oo tiro dad ah ay ku dhintaan halkaas.
Turidda iyo habka wanaagsan ee dadka wax loogu sheego ayuu ku saabsanyahay barnaamijka Tubta Toosan ee toddobaadkan, waxaa marti noogu ah Sheikh Maxmed C/llaahi Maxamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.